After Thingyan - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သင်ျကွနျကလညျးပွီးပွီ။ သင်ျကွနျမှာပြျောခဲ့ရတဲ့ အမှတျတရတှအေပွငျ မှဲခွောကျသှားတဲ့အသားအရေ၊ ယားပွီး အဖုတှထှေကျလာတတျတဲ့အသားအရကေ သင်ျကွနျပွီးလကျဆောငျ အနနေဲ့မြား ကနျြခဲ့ပါသလား?
ဒါတှကေို ဘယျလို ဖွရှေငျးကွမလဲ?
သင်ျကွနျပွီးရငျ အရပွေားပွသနာကို တျောတျောမြားမြား ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။ နှလေယျခေါငျရဲ့ ပွငျးတဲ့ အပူရှိနျ၊ သနျ့ရှငျးမှုမရှိတဲ့ရတှေကွေောငျ့အဓိကဖွဈပါတယျ။ ပထမဦးဆုံး အသားအရပွေနျလညျစိုပွဖေို့ဆိုရငျ
ရကေို တဈနေ့ ၂ လီတာလောကျသောကျပေးတာ၊ အရညျရှမျးတဲ့အသီးအနှံစားပေးတာအပွငျ အစိုဓာတျဖွညျ့ ခရမျ( Moisturizing Cream) ပုံမှနျလိမျးပေးရပါမယျ။
ပကျြစီးသှားတဲ့ အရပွေားအပျေါလှာအတှကျ ဆဲလျသေ ဖယျရှားပါ။
နလေောငျသှားတဲ့ အရပွေားအပျေါလှာကို Scrub သုံးပွီး ဖယျရှားလိုကျပါ။ ဒါဆို အရပွေားအလှာအသဈအတှကျ အသကျရူဝစသေလို အရပွေားကွညျလငျလာနိုငျပါတယျ။ Scrub ရှေူးခယျြရာမှာ မပွငျးထနျတာမြိုးကို ရှေးသငျ့ပါတယျ။
သင်ျကွနျပွီးနောကျပိုငျးအပွငျထှကျမယျဆိုရငျ ထီး၊ ဦးထုပျ၊ Sunscreen တို့နဲ့ထပျပွီး အရပွေား မထိခိုကျအောငျကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
အရပွေားအတှကျ အဓိကလိုအပျတဲ့ Vitamin C, Vitamin E ပါဝငျတဲ့ မကျြနှာပေါငျးတငျ Mask လေးတှေ ပွနျကပျပွီးအားဖွညျ့ပေးပါ။ လြှားစောငျးလကျပတျကလဲ အရပွေားပွနျကောငျးအောငျအားဖွညျ့ပေးနိုငျပါတယျ။ အိမျတှငျးပေါငျးတငျနညျးလေးတှကေိုလညျးအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
(၁) ခရမျးခဉျြသီး အနတေျောတဈလုံး
(၂)သခှားသီး အစိမျး အနတေျောတဈလုံးသာလိုအပျပါသညျ
ခရမျးခဉျြသီးကို အသုံးပွုရခွငျးမှာအရပွေားအတှကျ ခရမျးခဉျြသီးဟုဆိုရအောငျပငျ အရပွေားအတှကျ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြသော (anti oxidant) Lycopane မြားစှာပါဝငျသညျ။ ထို့ပွငျ သဘာဝနရေောငျကာပစ်စညျးဖွဈသလိုနလေောငျအသားအရကေို လငျြမွနျစှာသကျသာစသေညျ။ သခှားသီးကတော့ သဘာဝ အမာရှတျပြောကျဆေး ဟုချေါရအောငျ အစှမျးထကျသောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
ခရမျးခဉျြသီး ကိုဦးစှာ ပါးပါးလှီး ပွဈပွဈဖြျောထားပါ။ ထို့နောကျ သခါးသီးကို လညျး သေးငယျစှာလှီး၍ (သို့) ဖြျောစကျနှငျ့ ကြိတျ၍ အရညျပွဈ နှဈမြိုးကို
သမအောငျရောပွီး မကျြနှာအနှံ့ သုတျလိမျးပွီး မိနဈ ၂၀ခနျ့ထားပါ။ ထို့နောကျ ရဆေေးလိုကျသညျ့နှငျ့ ဝငျးပစိုပွသေော အသားအရကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျပီဖွဈပါသညျ။
သင်္ကြန်ကလည်းပြီးပြီ။ သင်္ကြန်မှာပျော်ခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရတွေအပြင် မွဲခြောက်သွားတဲ့အသားအရေ၊ ယားပြီး အဖုတွေထွက်လာတတ်တဲ့အသားအရေက သင်္ကြန်ပြီးလက်ဆောင် အနေနဲ့များ ကျန်ခဲ့ပါသလား?
ဒါတွေကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲ?
သင်္ကြန်ပြီးရင် အရေပြားပြသနာကို တော်တော်များများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ နွေလယ်ခေါင်ရဲ့ ပြင်းတဲ့ အပူရှိန်၊ သန့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့ရေတွေကြောင့်အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး အသားအရေပြန်လည်စိုပြေဖို့ဆိုရင်
ရေကို တစ်နေ့ ၂ လီတာလောက်သောက်ပေးတာ၊ အရည်ရွှမ်းတဲ့အသီးအနှံစားပေးတာအပြင် အစိုဓာတ်ဖြည့် ခရမ်( Moisturizing Cream) ပုံမှန်လိမ်းပေးရပါမယ်။
ပျက်စီးသွားတဲ့ အရေပြားအပေါ်လွှာအတွက် ဆဲလ်သေ ဖယ်ရှားပါ။
နေလောင်သွားတဲ့ အရေပြားအပေါ်လွှာကို Scrub သုံးပြီး ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ဒါဆို အရေပြားအလွှာအသစ်အတွက် အသက်ရူဝစေသလို အရေပြားကြည်လင်လာနိုင်ပါတယ်။ Scrub ရွေူးချယ်ရာမှာ မပြင်းထန်တာမျိုးကို ရွေးသင့်ပါတယ်။
သင်္ကြန်ပြီးနောက်ပိုင်းအပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင် ထီး၊ ဦးထုပ်၊ Sunscreen တို့နဲ့ထပ်ပြီး အရေပြား မထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားအတွက် အဓိကလိုအပ်တဲ့ Vitamin C, Vitamin E ပါဝင်တဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင် Mask လေးတွေ ပြန်ကပ်ပြီးအားဖြည့်ပေးပါ။ လျှားစောင်းလက်ပတ်ကလဲ အရေပြားပြန်ကောင်းအောင်အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းပေါင်းတင်နည်းလေးတွေကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
(၁) ခရမ်းချဉ်သီး အနေတော်တစ်လုံး
(၂)သခွားသီး အစိမ်း အနေတော်တစ်လုံးသာလိုအပ်ပါသည်
ခရမ်းချဉ်သီးကို အသုံးပြုရခြင်းမှာအရေပြားအတွက် ခရမ်းချဉ်သီးဟုဆိုရအောင်ပင် အရေပြားအတွက် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်သော (anti oxidant) Lycopane များစွာပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် သဘာဝနေရောင်ကာပစ္စည်းဖြစ်သလိုနေလောင်အသားအရေကို လျင်မြန်စွာသက်သာစေသည်။ သခွားသီးကတော့ သဘာဝ အမာရွတ်ပျောက်ဆေး ဟုခေါ်ရအောင် အစွမ်းထက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ခရမ်းချဉ်သီး ကိုဦးစွာ ပါးပါးလှီး ပြစ်ပြစ်ဖျော်ထားပါ။ ထို့နောက် သခါးသီးကို လည်း သေးငယ်စွာလှီး၍ (သို့) ဖျော်စက်နှင့် ကျိတ်၍ အရည်ပြစ် နှစ်မျိုးကို
သမအောင်ရောပြီး မျက်နှာအနှံ့ သုတ်လိမ်းပြီး မိနစ် ၂၀ခန့်ထားပါ။ ထို့နောက် ရေဆေးလိုက်သည့်နှင့် ဝင်းပစိုပြေသော အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပီဖြစ်ပါသည်။